Meel lagaa JECELYAHAY markaad ka cararto waxaad tagtaa meel lagaa NECEBYAHAY!!! – Gool FM
Meel lagaa JECELYAHAY markaad ka cararto waxaad tagtaa meel lagaa NECEBYAHAY!!!
(Europe) 18 Abriil 2018. Waxaan maqli jiray haddaad ka tagto Meel lagaa jecel yahay waxaad tagtaa meel lagaa Neceb yahay, sheekadan waxay qabsatay oo iminka daaha ka rogay Rugcadaagii AC Milan ee Kaka.
Kaka ayaa shaaciyay inuu ku dhibtooday ayna adag tahay in lala shaqeeyo Jose Mourinho.
35-jirka ka fariistay ciyaaraha bishii December, ayaa Real Madrid ku soo biiray 2009 isagoo adduun dhan 56 milyan uga soo tagay AC Milan, sanad uun ka hor markii uu Jose Mourinho ku soo biiray kooxda.
Laakiin xiddiga ku guuleystay FIFA World Player of the Year sanadii 2007 ayaa ku dhibtooday inuu is muujiyo saddexdii sano uu la joogay Mourinho ka hor inta uusan ammaah ugu laaban Milan.
“2009 waxaan aqbalay qorshaha ka yimid Real Madrid, laakiin u dhaqaaqistaas kaddib gabi ahaan waan bur buray, maxaa yeelay ma sameyn karin wixii aan ku soo sameeyay Milan,” Kaka ayaa sidaa u sheegay UOL.
“Gabi ahaan waan lumay, Talyaaniga qof kasta wuu i jeclaa, laakiin Spain dhammaan waxay doonayeen inaan ka tago.
“Waxaa taa dheer, Jose Mourinho wuxuu ahaa tababare ay igu adag tahay inaan la shaqeeyo.
“Markaan moodo inuu fursad i siinayo, marna ma dhaceyso.
“Ma helin fursada aan isaga ugu caddeeyo qaab ciyaareedkeyga wacan.
“Si adag ayaan u tababartay, waan dagaalamay in badanna waan duceystay, laakiin maadaama uu tababaruhu i aaminsanayn waxaan garowsaday inaan la shaqeyn karin isaga.
“Aad ayaan ugu faraxsanaa inaan ka soo tago Real Madrid aan ku soo laabto Milan gaar ahaan markii uu Jose Mourinho sheegay inaan ka mid ahaa ciyaartoydii ugu fiicneyd uu ebid la shaqeeyo.”.
Elman oo bar baro ka barisay Madbacadda
"Anaga oo kaliya ayaa Champions League ku garaaci karna Real Madrid" - Rummenigge